यस्तो पनि : उम्लिरहेको तेलमा हात हाल्छन् तर पोल्दैन ! – Etajakhabar
यस्तो पनि : उम्लिरहेको तेलमा हात हाल्छन् तर पोल्दैन !
काठमाडौं – हाम्रो हातमा रातो पानीको थोपा पर्‍यो भने या खाना बनाउँदा उछिट्टिएर तेलको थोपा पर्‍यो भने पोल्छ । नराम्रोसँग पीडा महसुस हुन्छ । तर, भारत राजस्थानको धौलपुर जिल्लाका एक व्यक्ति उम्लिरहेको तेलमा सीधै हात हाल्छन् । उम्लिरहेको तेल भएको कराहीमा हात हालेर समोसा र पुरी वर्काउने–फर्काउने र निकाल्ने गर्छन् ।
तेल तताएर पकाउनुपर्ने हरेक परिकार उनी खाली हातको माध्यमबाटै गर्छन् । उनको अचम्मको क्षमता देख्दा अरूलाई पत्याउन मुस्किल हुन्छ । कयौँ व्यक्ति बिहानै उनको दोकानमा हातले तारेको पुरी खान पुग्छन् ।
यी व्यक्ति हुन्, मुकेश कुशवाह । उनलाई तातो तेलमा हात हाल्दा न पोल्छ, न त पीडा नै हुन्छ । मुकेश भन्छन्, ‘तातो तेलले मेरो हातको पञ्जा पोल्दैन, तातोपनको महसुस नै हुँदैन । तर, पञ्जाभन्दा माथि तेल पर्‍यो भनेचाहिँ फोका उठ्छ ।’ नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
मुकेश १० वर्षदेखि लगातार यसरी नै यो पेसा गरिरहेका छन् । तातो कराहीमा छुँदा पनि तातोपनको महसुस नभएको कुरा उनलाई कामकै क्रममा भयो । बिस्तारै–बिस्तारै तातो तेलमा औँला राख्दा पनि कुनै असर नगर्ने हुन थाल्यो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १८, २०७४ समय: १०:५९:५४